..Maayir SOLTECO Cashuurtii Danyarta laga soo Uruurinayay ayuu KULMIYE ugu ololeynayaa..” Xamse Ciise - somalilandlivemedia
..Maayir SOLTECO Cashuurtii Danyarta laga soo Uruurinayay ayuu KULMIYE ugu ololeynayaa..” Xamse Ciise
10:13 7. November 2017
..Maayir SOLTECO Cashuurtii Danyarta laga soo Uruurinayay ayuu KULMIYE ugu ololeynayaa..”
Hargeysa( SLL.-Yool)-Xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI, ayaa deeq qalab direyska Ciyaaraha ah ku wareejiyay lix kooxood oo ka dhisan Degmooyinka Axmed Dhagax iyo 31-ka May ee Caasimada Hargeysa. Munaasibadii loo sameeyey wareejinta deeqdan agabka Ciyaaraha oo lagu qabtay Xafiiska Xisbiga WADDANI ee Xaafada Half London ee Magaalada Hargeysa, ayaa waxa ka soo qeybgalay Xamse Ciise Cabdi oo ka tirsan guddida ololaha Xisbiga WADDANI, Siyaasi Cali Cabdi Cilmi (Cali-Curri), Guddoomiyaha degmooyinka Axmed Dhagax iyo 31-ka May ee Xisbiga WADDANI Caydaruus Khabeeye, Cabdi-weli Cabdilaahi Cumar (Weli-Jicsin) iyo xubno ka socday lix kooxood iyo marti sharaf kale. Guddoomiyaha degmooyinka Axmed Dhagax iyo 31-ka May ee Xisbiga WADDANI Caydaruus Khabeeye ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in Xisbiga WADDANI qalab Ciyaareed ugu deeqay “Waxa farxad noo ah in maanta Xisbiga WADDANI lix kooxood oo ka dhisan degmooyinka Axmed Dhagax iyo 13-ka May uu gudoonsiiyey direys kubadeed. Inaguna waa inaan Xisbiga codka siinaa. Garoonkii kubadda cagta ee Hargeysa Stadium uu xidhan yahay wixii ka danbeeyey tartankii Ciyaaraha gobolada. Xukuumadda Xisbiga KULMIYE wax dan ah kama laha dhalinyarada oo ah mustaqbalka berito. Garoomadiina way wada iibisay oo waa KULMIYE waa u sabab inay dhalinyaradu tahriibaan”
Xamse Ciise Cabdi oo ka tirsan guddida ololaha Xisbiga WADDANI ayaa sheegay inuu Xisbiga WADDANI aad u danaynayo laf-dhabarta mustaqbalka Somaliland oo ah dhalinyarada “Waxaanu maanta idinku wareejinaynaa direyska lix kood oo ka kala socda degmooyinka Axmed dhagax iyo 31-ka May. Haddii aanu WADDANI nahay waxaanu dhiirigelinaynaa oo aan ku Xisaabtamaynaa dhalinyarada oo ah Mustaqbalka berito. Maalmaha soo socdana kooxo kale oo intan ka baddan ayaanu ku wareejinaynaa direyso kale”.
“Xisbiga KULMIYE waxa uu iibiyay dhammaan dhulkii danta guud ee loogu talo-galay in dhalinyarada garoono kubadeed looga dhiso waxaana arrinta Xisbiga KULMIYE ugu ololeynaya Maayirkii Caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan-SOLTECO waana Ayaan-daradii ugu weynayd uu ku talaabsato Maayirku.Waxa uu marayaa dantii guud ee laga jaray beeraha inuu ugu ololeynayo Xisbiga KULMIYE oo uu dhalinyaradii uu ka soo saarayo Xisbiga WADDANI uu ugu bedelayo baloogyo dhul ah, waa yaabka yaabkiisi. Lacagtii cashuurta dan-yarta laga soo qaaday ayuu ugu ololeynayaa KULMIYE, waxaanu ku sii darsaday inuu baloogyo dhul ah-na uu siiyo dhalinyarada uu ka soo saarayo Xisbiga WADDANI, waa arrin fool-xuma oo aan loo dul-qaadan Karin caqligayagana aan geli Karin hab-dhaqanka Maayir SOLTECO waan ka soo hor-jeedna waxaan leeyahay shacabka reer Somaliland arrintaa ka dhiidhiiyaan oo jawaab ha ka bixiyaan”.
“Guushi wax yar ayaa inooga hadhay, rajada iyo mustaqbalka Somaliland waa WADDANI ee dhalinyaradu ha ilaashadaan kaadhkooda codeynta oo Xisbiga KULMIYE iibsanayo”.Ayuu yidhi Xamse Ciise. Siyaasi Cali Cabdi Cilmi (Cali-CURRI) ayaa Ayaan-daro ku tilmaamay in Xisbiga KULMIYE laga soo sheegayo inuu kaadhadhkii codeynta doorashada madaxtooyada uu iibsanayo, waa kal-sooni-daro iyo inuu tartankii xalaasha ahaa uu ka hor yimi “Taageerayaasha Xisbiga WADDANI ka ha digtoonaadaan in kaadhkooda laga iibso, waa mustaqbalkoodii oo ay iibiyeen, dalku maanta is-bedel ayuu u baahan yahay is-bedelkiina waa WADDANI.”
“Rafadkii ugu danbeeyey ayuu Xisbiga KULMIYE rafayaa ee dacaayadaha raqiiska ah ee ay faafinayaan KULMIYE yaan la dhageysanin waynu guuleysanaynaa”Ayuu yidhi Cali-CURRI.
Cabdi-weli Cabdilaahi Cumar (Weli-Jicsin) oo ka tirsan guddida ololaha Xisbiga WADDANI ayaa sheegay inuu Xisbiga WADDANI guushisii muuqato oo ay kaaga markhaati yihiin cudduda taageerayaasha Xisbiga WADDANI ee gobolada iyo degmooyinku ay muujiyeen.
“..Xisbika KULMIYE waxa uu lumiyay oo uu dayacay mustaqbalkii Somaliland oo ah dhalinyarada, waxa la iibiyay garoonadii da’a-yartu Kubadda Ku Ciyaari lahayd, waxa xidhan garoonkii Hargeysa Stadium oo aan sababta la garanayn waxa magac ciyaal laga dhigay Wasaaradii dhalinyarada iyo Ciyaaraha oo noqotay fadhiid, isla markaana aan ka shaqeyn horumarintii dhalinyarada, waxaynu taas kaga bixi karnaa waxa weeyaan is-bedel aynu sameyno oo aynu doorano WADDANI.Codkeenu waa WADDANI, Guushu waa WADDANI ee dhalinyaro iyo waayeel-ba aynu codkeena siino..”..Ayuu yidhi Weli-Jicsin.
Axmed-Zaki Ooto Biixi oo ku hadlayay afka lixdii kooxood ee direyska Xisbiga WADDANI gudoonsiiyay ayaa u mahad-celiyay Xisbiga WADDANI inuu deeqdan direyska Ciyaaraha gudoonsiiyo. “..Waan ku faraxsanay in maanta Xisbiga WADDANI direys Ciyaareed na gudoonsiiyo, annaguna codkayaga ayaanu siinaynaa Xisbiga WADDANI..”.
Prof:- Axmed Ismaaciil Samater Oo Ka Damqadey Si Adagna Uga Haddley Ciida Ay Xukuumadda Jabuuti Ka Gurato Dalka Iyo Eedaha Uu Ku Miisay Jabuuti Iyo Xukuumadda Siilaanyo Video
Deg-Deg Halkan Ka Daawo Madaxa Olalaha Waddani Hamse Khayre Oo Faahfaahiyey Qaabkii Gabilay Loogu Xidhay
Newer PostHoggaamiyaha WADDANI oo ku Awood Sheegtay Deegaamada, Xayira, Ilka-Cadays, Xood, Bali-Rooble, Warta-Bayle, Ceel-Dheere Ee Gobolka Togdheer
Older Post Laascaanood loo laga Xaaran-timeeyey Isu-soo Bixii KULMIYE ee Shalay